Xuska maalinta Dhimirka oo maanta lagu qobtay magaalada Boosaaso+Sawiro – SBC
Xuska maalinta Dhimirka oo maanta lagu qobtay magaalada Boosaaso+Sawiro
Posted by Webmaster on Aktoober 10, 2011 Comments
Waxaa maantay oo ay taariikhdutahay 10 Bisha Tobnaad ay kubeegnayd maalinta xuska aduunka taasoo laga xusay meelbadan oo aduunka kamida, hadaba magaalada Bosaso ee xarunta ganacsiga puntland waxay kamid ahayd meelihi laga xusay maalintan.
xuska maalinta dhimirka ee Bosaso lagu qabtay waxaa soo qabanqaabiyay maamulka Cisbataalka qaybta dhimirka ayada oo ay kasooqaybgaleen masuuliyiin badan oo katirsan maamulka Gobalka Bari kan degmada Bosaso saraakiil katirsan wasaarada caafimaadka puntland, qaarkamida dadka ayagu qaba cudurka dhimirka ama waalida iyo waliba shaqaalaha xarunta dhimirka.
Xaflada ayaa ugu horayn waxaa kahadlay C/qaadir khaliif cali oo ah madaxa cisbataalka qaybta dhimirka oo asagu kawar bixiyay xaalada qaybta dhimir iyo waliba wakhtigii la asaasay qatbaya dhimir waxaa na uu sheegay”in xaalada qaybta dhimirka ay hada kajirto baahiya badan oo lasoo gudboonaaday xarunta asoogoo carabka ku adkayay dhinacyada Daawada, quundinta dadka qoba xanuunkan iyo meesha lagu haynlahaa madaama ay xaruntu tahay mid aan kufilnayn.
Asagoo intaa sii raaciyay in ay kadalbanayaan Dowlada hay,adaha, Ganacsatada iyo waliba cidksata oo gacankagaysankarta arintaan in wax kalaqabtaan islamarkaasna aysan jirin cid umaqan.
Dhanka kale waxaa kamid ahaa dadkii goobta kahadlay dad ayagu qobay cudarkaan oo hada kabogsooday balse gacanta wali aykuhayso xarunta dhimirka Bosaso” C/xakiin yuusuf axmed waxa uu kamid yahay dadka laga daweyay cudurkaan oo ay latacaashay xaruntu waxana uu sheegay in caafimaad kiisu uu hada yahay mid aad u wanaagsan asagoona u mahad celiyay shaqaalaha xarunta dhimirka Bosaso amaana u soojeediyay.
Sidoo kale maamulka Degmada Bosaso ayaa waxay balan qaad usamayyeen shaqaalaha xarunta tasoo uu balanqaaday duqa degmada Bosaso Xasan C/laa Xasan sheegana in ay wax kaqabandoonaan xaalada xarunta kajirta wakhtigaan bulshadana ugu baaqay in dadkaan waxa loo qobto.
Halku dhiga maantay ayaa ahaa Hakuqoslin dadka waalwaalan ee laqosal.
Faysal C/laahi Maxamed (Farateeb)